Paul Kagame oo ku guuleystey doorashadii Rwanda – Radio
August 5, 2017	215	Like
Madaxweynaha muddada dheer xilka hayey ee dalka Ruwanda Paul Kagame ayaa mar saddexaad ku guuleystey doorashadii maalintii shalay ka dhacdey dalka Ruwanda.
Kagame ayaa helay codad ka badan 90 boqolikiba, sida laga soo xiganayo guddiga doorashooyinka ee Ruwanda.
Labada musharax ee la tartamaayey ee kala ahaa Frank Habineza iyo Philippe Mpayimana ayaa midkastaa helay wax ka yar 1%.
Kagame ayaa u baahnaa 51% in uu mar saddexaad ku guuleysto hoggaaminta Ruwanda. Guddiga doorashada ee Ruwanda ayaa sheegaya in ka qaybqaadashada doorashadu ay ahayd 97%, waxaana codadkooda dhiibtey 6.9 Milyan oo qof.
Dastuurka Ruwanda ayaa wax laga bedalay si Kagame loogu oggolaado in uu mar saddexaad u tartami karo xafiiska, sidoo kale waxaa wax laga bedalay muddada xilka Madaxweynaha oo laga dhigay 5 sano halkii ay markii hore ka ahayd 7 sano.
January 20, 2019	61	1
January 20, 2019	45	Like
January 20, 2019	61	Like
Dowlada Qatar ayaa shalay go’aan ku gaartay inay sharciyo degenaansho iyo xaquuq dheeraad ah siiso ...